Nyika ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Iwe uri mune yenyasha isingagumi uko zvese zvakanaka.
Zvinoreva kadhi «Nyika»
La Gwaro repasi rose rinonongedzera kuhungwaru hwamutungamiri hunotsigira hupenyu mune izvi nepasi rose. Munzvimbo zhinji dzeTarot, chimiro chechikadzi uyo wave mufananidzo wedu wepasi rose. Iye anobva ku ChiHebheru, Gnostic uye alchemical tsika, uye inowanikwa pakati pedenga nepasi saamai venyama vemweya, mudzimai waMwari, uye mudziviriri wedu wemauto e karmic atakaburitsa paPasi mukusakura kwedu nekusaziva.
Tsamba yemwarikadzi wePasi inotikoka isu kuva vagari venyika - kana tangoona kugona kwemweya wedu kwazviri. Inozivisa kumuka kwekusafa kwemweya, kunoitwa pasina chikonzero chekufa.
Tsamba iyi, senge Zuva, inonzi haina zvazvinoreva zvisina kunaka zvisinei kuti inoratidzika sei uye sei. Kana iyo hermetic axiom iri "Ziva iwe pachako," uyu mufananidzo unomiririra izvo zvinozivikanwa kana hunhu chaihwo hweiye pachako huchiteerwa kurusununguko rwekusika uye kuzadzikiswa kwekupedzisira.
Iva wakadzikama mukuziva kuti uri kubudirira muchinangwa chako.
Zvinogoneka kuti tsamba El Mundo te iri kupa mvumo yekuita zvaunoda. Parizvino, kurudziro yako iri padyo nekuda kwaMwari. Kunyangwe iwe ukakanganisa, inozove yakanaka kunaka. Ramba uchishanda uye ramba uchifambira mberi.
Hapana chikonzero chekuramba uchitarisisa kana kukanganisa kwako kuzvidzora pamwe nekuverenga. Panzvimbo pekutsvaga kubvumirana kana kusimbiswa kwevamwe, ingo tamba kutamba. Mune mamwe mazwi, zvitaure, zviite zvakasununguka, uye rega machipisi awire kwavanogona.
Chinokosha chinangwa chehumwari. Kunyangwe vanhu vanozvibvuma kana kuti kwete hazvina kukosha. Nekudaro, kana iwe ukatendera yako ego kuti ifutire, iwe hauchisiri unobatsira kuchirongwa chikuru.